fjkm Itaosy: Saiky simban'ny mpangala-jaza | Hevitra MPANOHARIANA
loza koa izany!
misy tamban-jotra mihitsy oe ny mpangalan-jaza
Nampidirin'i news2dago @ 16:17, 2008-04-14 [Valio]
dia mahasakisaky lahy ny olona kah !
Nampidirin'i ikalamako @ 16:46, 2008-04-14 [Valio]
Hita ihany ve izany ilay zaza raha azoko tsara ?
Nampidirin'i pissoa @ 17:08, 2008-04-14 [Valio]
Navelany soa amantsara.
Nampidirin'i jentilisa @ 19:22, 2008-04-14 [Valio]
Mety saika nanaovan-dry zalahy demande de rançon angamba ireo zaza ireo ?
Nampidirin'i lehilahytsyresy @ 07:43, 2008-04-15 [Valio]
mmm mampatahotra, mivarahontsana mihitsy aho mieritreritra an'izany!
Nampidirin'i ikalakely @ 10:01, 2008-04-15 [Valio]
Tandremo tokoa ny ankizy fa dia loza mihitsy anie e. Sady amin'izao fotoana koa efa mihamaro ireny mpametaveta zaza ireny. rehefa vitany moa izay ataony, dia vonoiny ny zaza, mazava ho azy.
Nampidirin'i lehilahytsyresy @ 11:53, 2008-04-16 [Valio]
any madagasikara koa ve ?
Nampidirin'i Rajiosy @ 17:26, 2008-04-16 [Valio]
Izaho dia mpivavaka ao @ FJKM Itaosy, fa tokony ataon'ny ray aman-dreny rehetra dia tokony tsy hisaraka aminao eny mihidy ny zanakao mandritry ny fanompoam-pivavahana, raha sendra mivoaka any an-tokontany aza dia tokony arahimaso fa ny ratsy tsy kely làlana. Misaotra tompoko
Nampidirin'i Mamy @ 13:38, 2014-03-03 [Valio]